ती सुनन्दा पुष्कर जसलाई मोदीले ‘५० करोडकी गर्लफ्रेड’ भनेका थिए, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
ती सुनन्दा पुष्कर जसलाई मोदीले ‘५० करोडकी गर्लफ्रेड’ भनेका थिए
बीबीसी। दिल्लीको पटियाला हाउस कोर्टमा दायर गरिएको प्रहरीको चार्जशीटमा शशि थरुरमाथि श्रीमतीलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आरोप लगाइएको थियो।
दिल्लीको एक पाँच तारे होटलमा ५७ वर्षीया सुनन्दा पुष्कर १७ जनवरी, २०१४ मा आफ्नो कोठामा मृत फेला परेकी परेकी थिइन्।
सुनन्दा पुष्करको जन्म एक जनवरी १९६२ मा भएको थियो। उनी भारत प्रशासित कश्मीरको सोपोरकी वासिन्दा थिइन्।
उनका बुवा पीएन दास भारतीय सेनामा वरिष्ठ अधिकारी थिए। सुनन्दाले श्रीनगरको गभर्नमेन्ट कलेज फर वीमेनबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गरेकी थिइन्।
शशि थरुरसँग उनको तेस्रो विवाह थियो। उनको दोस्रो विवाहबाट एक सन्तानका रुपमा छोरा छन्, जुन २१ वर्षका भए। सुनन्दा पुष्करको नाम सबै भन्दा पहिला अप्रील २०१० मा इण्डियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को कोच्चि टीमको खरीदसँग जोडिएको एक विवाददेखि चर्चामा आएको हो।
यो टीम खरिदमा शशि थरुरको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठाइएको थियो। यो विवादले यति चर्को रुप लियो की थरुरले केन्द्रीय मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्यो। तर केही समयपछि उनलाई मन्त्रिमण्डलमो फेरि शामेल गरियो। यो विवादपछि सुनन्दा पुष्करले पनि कोच्चि टीममा आफ्नो हिस्सा छोड्नु पर्यो। यसअघि उनी दुवईको एक कम्पनीमा काम गर्थिन्। शशि थरुर र सुनन्दा पुष्करबीच अगस्ट २०१० मा विवाह भएको थियो।
‘५० करोडकी गर्लफ्रेण्ड’
अक्टुबर २०१२ मा हिमाचल प्रदेशको एक चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुनन्दा पुष्करलाई ‘५० करोडकी गर्लफ्रेण्ड’ को संज्ञा दिएका थिए। मोदीको सो अभिव्यक्ति राजनीतिक दल र सामाजिक संजालमा चर्चाको विषय भएको थियो।
त्यसको जवाफमा शशि थरुरले ट्वीटमार्फत मोदीलाई प्रेमको कुनै मूल्य नहुने बताएका थिए। त्यसपछि पनि शशि थरुर र सुनन्दा पुष्करका बारेमा भारतीय जनता पार्टीले आलोचना गर्न छोडेन। भाजपा उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवीले एक बयानमा शशि थरुरलाई ‘लभ गुरु’ को उपमा दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘ यदि देशमा लभ मन्त्रालय बन्यो भने त्यसको जिम्मा शशि थरुरलाई लिनुपर्छ।’
डिसेम्बर २०१३ मा सुनन्दा पुष्करले भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार नरेन्द्र मोदीको समर्थन गर्दै समर्थन गर्दै भनेका थिए, ‘संविधानको अनुच्छेद ३७० को समीक्षा हुनुपर्छ।’
अनुच्छेद ३७० अनुसार जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिइएको छ। एक टेलिभिजन च्यानललाई दिइएको एक अन्तर्वातामा उनले भनेका थिए, ‘संविधानको अनुच्छेद ३७० मा फेरि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने महिला विरुद्ध भेदभाव हुन्छ। कश्मीरसँगको मेरो दोस्तीले मलाइ के जानकारी भयो भने कुनै गैर कश्मीरीसँग विवाह गर्दा हामीलाई सरकारी जागिर मिल्दैन। युवती कश्मीरकी नभएपनि कश्मीरी परिवारमा विवाह गर्छन। उनीहरुलाई सरकारी जागिर मिल्छ र उनीहरुका बच्चालाई सबै अधिकार मिल्छ।’
१५ जनवरी २०१४ मा अचानक शशि थरुर र सुनन्दा पुष्करबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। जब शशि थरुरलेको ट्वीटर अकाउन्टबाट पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरारलाई गरिएको केही ट्वीट सार्वजनिक भयो। जसबाट उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको आशंका गरियो।
त्यसपछि थरुरले ट्वीट गरेको अकाउन्ट ह्याक गरियो। उता पाकिस्तानी पत्रकार तरारले त्यस प्रकारको सम्बन्ध नभएको बताइन्। विवाद बढ्दै गएपछि थरुर र सुनन्दाले एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो वैवाहिक जीवन सुखमय भइरहेको छ। हामीहरु यो सम्बन्ध यसैगरी बितोस भन्ने चाहन्छौं।’